I-Israel: Akukho Palestine, ayinakuvunyelwa ukuba ijoyine uMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO)
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » I-Israel: Akukho Palestine, ayinakuvunyelwa ukuba ijoyine uMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO)
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • I-Israel Iphula Iindaba • IPalestine Breaking News • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Septemba 9, 2017
Uninzi lucinga ukhenketho yinto u-Israyeli kunye nePalestine abavumayo kwaye ukhenketho lushishino loxolo-banokuba baphosakele.
Ngaphandle kokumanyelwa kwetyala likaNobhala Jikelele we-UNWTO olandelayo, esinye isigqibo esibalulekileyo sisicelo esenziwe nguMphathiswa Wezokhenketho wasePalestine sokuba lilungu elipheleleyo njengelizwe kwi-United Nations World Tourism Organisation. Isicelo sePalestine sangeniswa kunyaka ophelileyo kwaye iNdibano yeZizwe eziManyeneyo kufuneka ivumelane nesininzi sesibini kwisithathu ukwamkela iPalestine njengelizwe elitsha lokujoyina umbutho. I-General Assembly iyahlangana eChengdu, China kwiveki ezayo. IPalestine yaba lilungu elipheleleyo le-UNESCO kwi2011.
Ukhenketho ngumjelo obalulekileyo wengeniso yePalestine kunye ne-Israel. Nangona kunjalo, i-Israel ilawulwa ngokungathanga ngqo kukhenketho lwasePalestine kuba yonke imida yamazwe onke ilawulwa nguRhulumente wamaJuda. I-UNWTO "ilungelo lomntu lokundwendwela abakhenkethi" ayisoloko isebenza xa kufikwa ekutyeleleni iPalestine, kwaye kufuneka ujongane nemithetho yakwa-Israyeli.
Amaxesha ngamaxesha, u-Israyeli ubeka izithintelo ngakumbi kukhenketho ePalestine, kubandakanya ukungavumeli iindwendwe zasentshona ukuba ziphinde zingene kwa-Israyeli xa zihlala ehotele ePalestine.
Nangona kunjalo, intsebenziswano phakathi kwePalestine ne-Israel ngumsebenzi obalulekileyo kwaye oyimpumelelo, kunye nemibutho kubandakanya iZiko laMazwe ngaMazwe loXolo ngezoKhenketho kunye nomsunguli wayo uLouis D'Amore basebenze ngokungakhathali amashumi eminyaka ukwenza bobabini u-Israyeli kunye nePalestine baqonde ukubaluleka kokhenketho noxolo. U-Louis d'Amore uzokuzimasa i-UNWTO General Assembly eChengdu kwiveki ezayo.
Isithethi se-Israel saNgaphandle sithe indawo ka-Israyeli kukuba "i-State Of Palestine" ayikho, kwaye ngenxa yoko ayinakwamkelwa njengombuso kwi-UN okanye kuyo nayiphi na imibutho edibeneyo.
U-Israyeli, ewe, uyazi ukuba imali ihlala ixoxa, kwaye uxinzelelo kuonozakuzaku lubekwe ku-Taleb Rifai, usosiba Jordanian Jikelele ukuba angavumeli intshukumo yase Palestina. Ukuthetha ngemali kunye nobuphathiswa bama-Israyeli bamanye amazwe busongele: Ukunika ubulungu kurhulumente kubantu basePalestine kuya kukhokelela kupolitiko olukhulu lombutho kunye nokuncipha kwenkxaso-mali. Ngapha koko, uMbuso wamaJuda uqhubeka noxinzelelo kumazwe angamalungu e-UWNTO esithi: "Asilindelanga nayiphi na impembelelo embi ku-Israyeli okanye ukuqhubeka nomsebenzi kulo mbutho - umonakalo olindelekileyo uyakuba kulo mbutho ngokwawo."
U-Israel uthathe onke amanyathelo ozakuzo ukucima esi sicelo, ”isithethi somphathiswa wezangaphandle sixelele iJerusalem Post.
I-United States yaseMelika ayilolungu le-UNWTO, kodwa u-Israyeli wakwa-Israyeli ukwabandakanyeke nabantu baseMelika, abathe balumkisa abantu base Palestina ukuba ukuzibandakanya kwabo kulo mbutho kunokuba neziphumo kubudlelwane babo ne-US.
Isicelo sePalestine kulindeleke ukuba siqinisekiswe, ngakumbi kuba amazwe anokuthembela ekuxhaseni u-Israyeli kwaye avote ngokuchasene nentshukumo-enje nge-US, Canada, i-UK kunye ne-Australia-abangamalungu e-UNWTO.
Ukuba nePalestine njengelungu elipheleleyo lokuvota kuluntu lwehlabathi kunokuba linyathelo elibalulekileyo eliya phambili lokukhusela uxolo kunye nokwandisa kukhenketho okwenza indawo ekuhlalwa kuyo ibonakale ingahlali kwaye izimele ngakumbi.